Samsung Kies waa Samsung software lahaansho ah ee xiriirka ka dhexeeya qalab Samsung ah oo computer ah. Samsung Kies waxaa loo isticmaali karaa si ay u gudbiyaan qalabka warbaahinta sida sawiro, videos iyo music ka your computer si aad qalab Samsung iyo qeybsanaan ku xigeenka. Marka laga reebo xogta kala iibsiga, Samsung Kies sidoo adeegta hawlaha muhiimka ah ee kale.
Tusaale ahaan, Samsung Kies waxaa loo isticmaali karaa si ay kor firmware aad qalab Samsung ama si loo xaliyo wax dhibaato ah firmware aad qalab Samsung. Waxaa intaa dheer, waxa loo isticmaali karaa in ay gurmad iyo soo celinta qalab Samsung ah. Samsung Kies waxaa si tartiib ah loo bedelay Samsung Switch Smart laakiin qayb weyn oo ka mid ah qalabka user Samsung saldhigga wali isticmaala Kies. Sidaa darteed, qodobkan wuxuu diiradda saarayaa dadka isticmaala sida la siinayo ilaa macluumaadka ku saabsan taariikhda Samsung Kies.
Laga bilaabo qoraalkii la heli karo Samsung Kies for Windows oo markaas uusan u dhaqaaqin kuwa diyaar u ah Mac, waxaan la falanqeeyo doonaa qalab iyo nidaamyada hawlgalka oo ay taageerayaan kasta. Link A download taasoo keentay in software-ka rasmiga ah Samsung bixiyo ayaa sidoo kale la siiyaa istareexsan ee akhristayaasha. Haddii Softwares sida Kies Air iyo Kies Mini oo rasmi ah qoraalkii dambe looma heli karo, waxaan ku arzaaqnayna wax xiraya boggag xisbiga saddexaad ka halkaas oo software ah lagala soo bixi karaa.
Qalabka ay taageerayaan: Dhammaan qalabka Samsung Galaxy ordaya 4.3 Android ama ka dib
Computer OS taageerayaan: Windows XP (SP3), Windows 7 iyo Windows 8
URL Download: Kies 3
Version A ee Kies Samsung in ay taageertaa qalabka ka weyn Samsung. Haddii aad leedahay qalab in la sii daayay ka hor September 2013 ama mid ka mid ah in uu leeyahay Android version 4.2 ama ka yar, waa in aad kala soo bixi Kies 2.6. Waxaa la shaqaysaa dhammaan qaybaha Windows mid qabi karaan in la helo in la isticmaalo maanta. Kies 2.6 lagala soo bixi karaa xiriirka hoose bixiyo.
Qalabka ay taageerayaan: Qalabka bilaabay ka hor September 2013
OS computer taageerayaan: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 iyo Windows 8
Tani waa dhigiisa ah ee Kies 3 Windows. Maskaxda ku hay in uu jiro Kies ma 2.6 Mac si muhiimad, Kies 3 leeyahay in ay bixiyaan taageero u Samsung oo dhan casriga ah halkaas. Xidhiidhku waa in download rasmi ah ayaa hoos ku siiyo.
Qalabka ay taageerayaan: Dhammaan qalabka Samsung Galaxy socda Android 4.3 ama ka dib versions.
Computer OS taageerayaan: OSX 10.5 oo kor ku xusan
Hawada Kies waa wireless qaybsiga dab software. Kies awood u file sharing u dhexeeya qalabka Samsung ama u dhexeeya qalabka Samsung iyo laptops mid aad u fudud sida ay waddaa in browser oo ka mid ah qalabka ku xiran. Dhammaan waxay u baahan tahay in u user ay u sameeyaan waa in ay leeyihiin qalab uu ku shabakad isku Wi-Fi. Iyadoo dhalashada Samsung Smart Switch, hawada Kies ayaa sidoo kale noqon huriye Si kastaba ha ahaatee, haddii aad doonaysid in aad la isticmaalo software ka eeg xiriirka hoose siiyey aad ka soo dejisan kartaa.
Qalabka ay taageerayaan: Dhammaan Qalabka Samsung socda Android OS 2.2-4.1
OS computer taageerayaan: Windows 7, Windows 8
Kies mini waa software ah in la qorsheeyay oo ka dhigay heli karaa oo keliya qaar ka mid ah qalabka si gaar ah Samsung inkasta oo lagu rakibi karo on qaar ka mid ah qalabka kale ee Samsung sidoo. Kies mini uu noqday halkii huriye weli waa qalab ku anfacaya si aad u hesho updates firmware. Kies mini ogolaanaysaa users firmware flash waxa ku sugan gobolka beta iyo kaliya in la bexeen karaa iyadoo la isticmaalayo Oden. Ma sii Samsung bixisaa Kies mini in la soo bixi website-ka rasmiga ah laakiin websites xisbiga saddexaad ay weli dhismeedkan ammaan ah. Waxaad Kies mini ka link hoos ku soo bixi kartaa.
Qalabka ay taageerayaan, kaliya qalabka Samsung gaar ah sida Samsung koraya, Captivate ama nooga
OS computer taageerayaan: Windows XP / Vista / 7
Waa kuwee waa nooca ugu dambeeya ee Samsung Kies?
Samsung Kies ayaa la bedelay Samsung Smart Switch haddii aan si adag hadlo oo ku saabsan Samsung software ugu danbeeyay ee la xiriira wadaagidda macluumaadka. Samsung Kies Si kastaba ha ahaatee, weli door muhiim ah u isticmaala oo u cusbooneysiin taleefanadooda iyagoo isticmaalaya Samsung Kies halkii ay in ka badan updates hawada by Samsung ah. Wixii Windows, ee Kies version dambeeyay qalabka Samsung Galaxy iyo qalabka la Android version 4.3 iyo wixii ka sarreeya waa Kies 3 (dhisi: 3.2.15041_2). Dadka lagu daydo wax yar ka weyn, Kies 2.6 (dhisi: 2.6.3.14074_11) waa version warar. Dadka isticmaala Mac, Kies 3 waa version warar ku la dhisayo 3.1.0.15042_6.
Hadda waxaannu aragnay ayaannu ka dhan version of Samsung Kies iyo iyaga falanqeeyay mid mid, doorashada mid ku haboon baahidaada waa in aanay noqon dhibaato dambe. Sidaas, ku tago oo isticmaali on xiriirka kor ku siiyo si ay u bilaabaan aad waayo-aragnimo Samsung Kies hadda.
> Resource > Samsung > Samsung Kies Download: Version kasta oo aad u baahan tahay!